Single ကိုကိုမမတို့အတွက် Valentine's Day မှာကြည့်ဖို့ ရုပ်ရှင် ၁၀ ကား - MoviesFan
Single ကိုကိုမမတို့အတွက် Valentine’s Day မှာကြည့်ဖို့ ရုပ်ရှင် ၁၀ ကား
“ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ဆိုတာဘာကြီးတုန်း.. မသိဖူး လာမမေးနဲ့” လို့ရောချတတ်တဲ့ မမတွေ ညီမလေးတွေ..
“ကိုယ်တွေကတော့ ဘာဘာညာညာမရှိတော့ Valentine’s Day မှာ ပိုက်ဆံမကုန်ဖူးပေါ့” လို့ ရူးချင်ယောင်ဆောင်တဲ့ ကိုကိုတွေ ညီလေးတွေ..
ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ဖြစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ မှာ လက်ချင်းချိတ်ပြီး အပြင်အတူထွက်ဖို့ အတွဲလေးမရှိဖူးဆိုရင် အိမ်ထဲမှာနေတာက စိတ်ချမ်းသာ လူကျန်းမာပြီး မျက်စိနောက်သက်သာတယ်ဆိုတာ ဝါရင့် FA တွေက လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့တဲ့ အကြံပေးစကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ အိမ်မှာနေရင်း ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်လာပါတယ်။
အဲဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အရမ်းကြီးခေါင်းစားခံမနေပါနဲ့လို့.. MoviesFan ကနေပြီးတော့ ရောင်းရင်း FA တွေအတွက် Valentine’s Day မှာ အိမ်တွင်းအောင်းပြီး ကြည့်လို့ကောင်းမယ့် ဇာတ်ကားလေး ၁၀ ခုကို ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Happy FA Da… Happy Valentine’s Day ပါ !
မင်္ဂလာဝတ်စုံလှလှလေး ဝတ်ခွင့်ရမယ့်အချိန်ကို အမျှော်လင့်ကြီး မျှော်လင့်နေပေမယ့် အခုချိန်ထိ ရေးရေးလေးတောင် အကောင်အထည်မပေါ်လာသေးလို့ စိတ်ညစ်နေပါသလား.. 27 Dresses ရဲ့မင်းသမီး Jane လောက်တော့ အဖြစ်မဆိုးသေးပါဘူး။ သူ့ခမျာ သူတို့သမီးအရံ ၂၇ ကြိမ်တိုင်အောင်လုပ်ဖူးပေမယ့် သူကိုယ်တိုင် စင်မြင့်ထက်မှာ လက်စွပ်လဲလှယ်ခွင့်မကြုံရသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကံကြမ္မာကြီးက တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ သင့်ကိုမျက်နှာသာပေးမယ်ဆိုတာကို ဒီပေါ့ပေါ့ပါးပါး အချစ်ဟာသကားလေးက သက်သေပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားလေးကိုကြည့်ပြီး မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ စိတ်ကူးယဉ်နေတဲ့ FA မမ တွေ ခွန်အားယူလို့ရပါတယ်.. အားမငယ်ကြပါနဲ့လို့.. ?
FA ကိုကိုတို့ရေ.. အော့ကြောလန်ရလောက်အောင် အမှန်အကန်ဆိုးတဲ့ကောင်မလေးတွေကလည်း သူ့ဟာနဲ့သူချစ်ဖို့ကောင်းကြပါတယ်။ သူတို့လေးတွေက ကိုယ့်ရဲ့ အသည်းတစ်ခြမ်းမဖြစ်လာဖူးလို့ မပြောနိုင်ပါဘူး။ အဲဒီတော့ ဆိုးတာကိုသည်းမခံနိုင်လို့ သင်္ကြန်မကျခင်ကတည်းက ရေကုန်မနေပါနဲ့လို့.. အချစ်ဆိုတာကို မထင်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာ မထင်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကို ဒီ classic romcom ဇာတ်ကားလေးကိုကြည့်ရှုရင်း အဖြေရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ရည်းစားမရနိုင်လို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့ Single မမတွေ.. ရှာတတ်ရင် အချစ်ဆိုတာကို ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ညီမလေးတွေ၊ အစ်မကြီးတွေနဲ့ အချိန်လေးပေးပြီး နေထိုင်လိုက်ရင် သင့်ရင်ထဲက အားငယ်မှုတွေ ယူပစ်သလိုပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ မယုံဘူးလား.. Frozen ထဲက Elsa ကတော့ သူညီမလေး Anna ကို ပုံအောချစ်ပြီး ပျော်ရွှင်နေလေရဲ့။ ဒီကားကြည့်ရင်း FA ဘဝရဲ့ ပူပင်သောကတွေကို သင့်ခေါင်းထဲကနေ Let It Go ပလိုက်ပါလို့..
ဒီတစ်ခုကတော့ ဘဒိုတွေအတွက်ပါ။ မေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်.. စကားပြောတတ်တဲ့ Teddy Bear အရုပ်လေးနဲ့ အမှန်အကန်လန်းတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်.. ဘယ်သူ့ကိုရွေးမလဲ။
ရည်းစားဆိုရင် Valentine လက်ဆောင်စီစဉ်ပေးရမယ်၊ လျှောက်လည်ဖို့ပိုက်ဆံက ကုန်ဦးမယ်၊ ဒီကြားထဲ Shopping Center တွေမှာဖွင့်ထားတဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေထဲပြေးဝင်သွားရင် ရင်တမမနဲ့ menu စာရွက်တွေလှန်ရဦးမယ်။ Teddy Bear ဆိုရင်အဝတ်အစားဖိုးလည်းမကုန်၊ အပြင်ထွက်စရာလည်းမလို၊ စားစရာသောက်စရာဖိုးလည်း ကုန်စရာမရှိ၊ ဖက်ထားရင်လည်း အမွေးပွပွလေးနဲ့မို့ရှယ်ကောင်း။
ဒီ Buddy Comedy ဇာတ်ကားလေးကို Valentine’s Day မှာ သင့်ရဲ့ Best Bro တွေနဲ့အတူကြည့်ရှုပြီး အပေါ်မှာမေးထားတာလေးကို အဖြေရှာကြည့်လိုက်ပါ.. အချိန်ကုန်လို့ကုန်မှန်းမသိဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ကဲ.. ဘဒိုတို့ အရွေးမမှားကြပါနဲ့နော်.. Bromance FTW ! ? ?
FA တွေထုံးစံအတိုင်း Valentine’s Day ဆိုရင် အလိုအလျှောက် သောကတွေများရတဲ့အထဲ အလုပ်ကကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးက ပူညံပူညံနဲ့ပွားနေလို့ စိတ်ရှုပ်နေရပါသလား.. သင့်ရင်ထဲကအလုံးကြီးတွေကို Horrible Bosses ကြည့်ရင်း ဖြေဖျောက်လိုက်ပါလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားထဲက ပယ်ပယ်နယ်နယ် အဗျင်းခံနေရတဲ့ အလုပ်ရှင်တွေနေရာမှာ ကိုယ်ကြည့်မရတဲ့လူကြီးကို အစားထိုးကြည့်လိုက်ရင် သင့်ရဲ့သောကတွေ ခဏတာပြေပျောက်သွားမှာအမှန်ပါပဲ။ အပြင်မှာတော့ ဘာမှသွားမလုပ်နဲ့ပေါ့နော်.. နေရင်းထိုင်ရင်း အမှုပတ်နေမှာစိုးလို့ပါ။ ?
ဟာ.. Valentine မှာ အချစ်အကြောင်းကိုမစဉ်းစားချင်တာပါကွာ ဆိုတဲ့ FA ကိုကိုညီညီတွေအတွက် Lightsaber တဝီတီ၊ လေဆာသေနတ် တပြူးပြူးနဲ့ Jedi တို့ကမ္ဘာထဲမှာ စီးမြောကြည့်လိုက်ဖို့ အကြံပေးပါရစေ။ Original Trilogy ၃ ကား၊ Prequel Trilogy ၃ ကား၊ Sequel Trilogy ၂ ကား၊ Spin-off ၁ ကား.. မနက်မိုးလင်းကတည်းက ထိုင်ကြည့်ရင်တောင် တစ်နေကုန်ကြည့်ဖို့အတွက် ကောင်းကောင်းကြီးလုံလောက်ပါတယ်။ ဟာ. အများကြီးပဲ.. ဘယ်ဟာကြည့်ရမလဲ နည်းနည်းရွေးပေးပါဆိုရင် Prequel ၃ ကားကလွဲပြီး ကျန်တာတွေကို ကြည့်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ ‘The Force’ အကြောင်းကိုလေ့လာချင်တဲ့ ရောင်းရင်းတွေကိုပါခေါ်ပြီး အတူတူကြည့်ရင် ပိုလို့တောင်ပျော်ဖို့ကောင်းပါလိမ့်မယ်။
သင်ဟာ ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပြတ်သွားပြီး ဘယ်လိုမှ ပြန်ဆက်ဖို့လမ်းစမရှိတော့လို့ ကြေကွဲဝမ်းနည်းနေရပါသလား.. သူ/သူမ ကို ဘယ်လိုမှမေ့လို့မရဖြစ်နေပါသလား.. ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရောက်ရင် အရင်နှစ် Valentine နေ့တွေကို သူလေးနဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တွေကို ပြန်လည်အောက်မေ့တမ်းတမိမှာ စိုးရိမ်နေပါသလား…
မိုးရွာပြီးရင် နေသာပါတယ်.. ပူလောင်တဲ့ နွေရာသီကုန်ဆုံးပြီးသွားရင် အေးမြတဲ့ဆောင်းရာသီက သင့်ဆီကိုဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ရောက်လာမှာပါ။ 500 Days of Summer ကိုကြည့်ပြီး Tom တစ်ယောက် ဒီအခြေအနေကို ဘယ်လိုဖြတ်ကျော်ခဲ့သလဲဆိုတာကို နမူနာယူကြည့်လိုက်ပါလား.. သင်ခံစားနေရတာတွေကို ဖြေဖျောက်ဖို့ လမ်းစတွေ့ကောင်းတွေ့နိုင်မှာပါ။ ?
ကိုယ့်ကိုထားခဲ့တဲ့ ex ကို မေ့ချင်ပါတယ်ဆိုမှ နေရာတကာမှာ ပြန်ပြန်တွေ့နေရတာကြီးက တကယ်ဖီးလ်ကြဲပါတယ်.. အဆိုးဆုံးကတော့ ကိုယ့် ex က နောက်တစ်ယောက်နဲ့ ပျော်ပါးနေတာပါ။ အဲတော့ကာ ဘယ်လိုလုပ်ရင် သူ့ကိုလုံးလုံးကြီးမေ့နိုင်မှာလဲ။ ဒီဇာတ်ကားထဲက Peter တစ်ယောက်ကတော့ သူ့ကိုထားသွားခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်မင်းသမီး Sarah Marshall ကိုမေ့နိုင်ဖို့ နည်းမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားလေးက ချစ်သူများနေ့ကိုရင်မဆိုင်ချင်တဲ့ FA အမည်ခံ အသည်းကွဲ single တို့အတွက် ကွက်တိပဲဖြစ်မှာပါ။
သူမရဲ့ မဂ္ဂဇင်းတိုက်က တာဝန်ပေးလို့ ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက်ကို ၁၀ ရက်အတွင်းဖြတ်နည်း ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုရေးရမယ့် Andie Anderson ၊ သူ့ရဲ့အလုပ်ရှင်နဲ့ အလောင်းအစားလုပ်ရာကနေ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ၁၀ ရက်အတွင်းရအောင်လိုက်ပြရမယ့် Benjamin Barry.. ရည်ရွယ်ချက်ကိုယ်စီနဲ့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချဉ်းကပ်ကြရာကနေ ဘာတွေဖြစ်ကုန်မလဲ…
ခေါင်းစဉ်ကိုသာကြည့်လိုက်ပါ.. ယူတတ်ရင် ပညာအများကြီးရမယ့် ဇာတ်ကားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ?
Well… ခေါင်းစဉ်မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ Andy Stitzer ဟာ အသက် ၄၀ အရွယ် လူပျိုကြီးတစ်ယောက်ပါ။ သူအသက် ၄၀ အရွယ်အထိ ဘာဆိုဘာမှ မဘာရသေးတာကို သူ့သူငယ်ချင်းတွေကသိသွားတော့ သူ့ကိုနည်းမျိုးစုံနဲ့ အစွံထုတ်ဖို့ကြိုးစားကြပါတော့တယ်။ ပြောချင်တာကတော့ ကိုကြီးတို့ အားမငယ်ကြပါနဲ့လို့.. ဘော်ဒါတွေကောင်းရင် ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ?
ကဲ.. ချစ်သူများနေ့ကို အတွဲမရှိပဲဖြတ်ကျော်ဖို့အတွက် လက်နက်တွေညွှန်းပေးလိုက်ပါပြီ။ ဒါတွေကိုအသုံးချပြီး ပျော်ရွှင်ဖွယ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ လေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Previous Post: Superhero fan တွေအတွက် Deadpool2ကိုမကြာခင်ရုံတင်တော့မည်…
Next Post: Venom မပါဝင်တဲ့ ‘Venom’ ရုပ်ရှင်ရဲ့ Teaser Trailer